Jaamacadda Gaarisa oo si KMG ah loo xiray – Radio Daljir
Jaamacadda Gaarisa oo si KMG ah loo xiray
Abriil 4, 2015 1:47 b 0
Sabti, Abriil 04, 2015 (Daljir) —Wasiirka Waxbarashada ee Kenya, Prof. Jacob Kaimenyi ayaa maanta oo Jimco ah ku dhawaaqay in la joojiyay waxbarashada guud ee Jaamacadda Gaarisa, kaddib markii ay Khamiistii shalay weerartay kooxda Al-shabaab oo ku dishay 147-qof, kuna dhaawacmay 79-qof oo kale.
Prof. Jacob ayaa ka sheegay khudbad uu ugu jeediyay ardaydii weerarkaas ka badbaaday xerada millateriga ee Gaarisa, isagoo xusay inay wada-tashi kala yeelan doonaan amniga jaamacadda maamulka guud iyo xubnaha Gaarisa kasoo jeeda ee dowladda ku jira.
Hakinta waxbarashada Jaamacadda ayaanu sheegin wasiirku inta ay qaadan doonto, balse wuxuu xusay in illaa amar dambe ay xiraanayso Jaamacadda Gaarisa oo ay dhiganayeen in ka badan 800 oo arday.
“Dhammaan ardayadii dhiganaysay Jaamacadda Gaarisa, waxaan si meel-ku-gaar ah loogu wareejinayaa xarunta weyn ee Jaamacadda Moi, halkaasoo waxbarashadoodii kasii wadan doonaan iyadoo aanay jirin wax dib u dhac oo ku imaanaysa waxbarashadooda,” ayuu yiri Prof. Kaimenyi.
Sidoo kale, wasiirka ayaa sheegay in wasiirka caafimaadka Kenya uu diiday inuu qaato talooyin ay horay ugu soo jeediyeen ardaydii ay dhibaatadu soo gaartay iyo waalidkood.
Wasiirka waxbarashada Kenya ayaa sidoo kale ugu baaqay xukuumadda Kenya inay sugto ammaanka dhammaan goobaha wax lagu qaabto ee waddanka si looga hortago mid la mid ah xasuuqii shalay ka dhacay Jaamacadda Gaarisa.
Xukuumadda Kenya ayaa markii uu weerarku billowday waxay u dirtay afar diyaaradood oo kuwa Qumaatiga u kaca ah ee Helicopter-ka, si ay u soo qaadaan dhaawacmay ardaydii ku dhaawacmay weerarkii Jaamacadda Gaarisa.
Ugu dambeyn, weerarkaan ayaa waxaa sheegatay Xarakada Al-shabaab ee Somalia, iyadoo ku hanjabtay inay weerarro kale oo dheeraad ah ay dalka Kenya ka geysan doonto, haddii aysan ciidamadooda kala bixin Somalia.
Ardayda Jaamacada PSU Garowe Oo Bilaabay Olole Lagu Xaqiijanayo Fayadhowrka Cuntada